Garoonka Diyaaradaha Gaalkacyo oo maanta xiran iyo Puntilnad oo Ciidamo badan soo dhoobtay Garoonka Gaalkacyo – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
Wararka ka imaanaya Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug ayaa sheegaya in maanta Garoonka Diyaardaha Magaaladaasi aysan kasoo dagin Diyaaradaha Rakaabka ah ee Maalin walbo kasoo dagi jiray Garoonkaasi.
Wariye kusugan Magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay in maanta hakad uu ku jirto shaqooyinka maalin lahaa ee Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde , waxa uuna intaa raaciyay in garoonka saakay ay kasoo dagtay kaliya Diyaarada Qaadka keenta Magaaladaasi.
Ma jiro wax war ah oo kasoo baxay Maamulka Garoonka Diyaaradaha Magaalada Gaalkacyo iyo maamulada Galmudug iyo Puntiland oo wada adeegsada garoonkaasi , waxaana jira xiisado laga soo sheegayo Magaaladaasi u dhaxeeya labada Maalin.
Dhinaca Kale Wararka ka imaanaya Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo ee maamusho Puntiland ayaa sheegaya in Ciidamo tiro badan maamulkaasi ay soo dhoobeen garoonka Diyaaradaha si ay u xoojiyaan ciidamadii horey u joogay.
Waxaana Caawa ku eg Waqti uu Madaxweynaha Galmudug Cabdi Xasan Cawaale u qabtay Maamulka Puntiland in ay xayiraada uga qaado Garoonka Diyaaradeed ay ka furteen Gaalkacyo, lamana saadaalin karo xiisada cusub ee u dhaxeysa Puntiland iyo Galmudug halka ay ku biyo shuban doonto.
Previous: Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Shaqada iyo arrimaha bulshada ee Xukuumadda Soomaaliya iyo Agaasimaha arrimaha bulshada ee Xafiiska Ra’iisul wasaaraha ayaa maanta kulan la qaatay xubno matalayay xoogsatada dekadda Muqdisho, kuwaasi oo ay ka dhageysteen cabashooyin ku saabsan in la duudsiiyay xaquuqdii ay ku lahaayeen ka shaqeynta dekadda. Qaarka mid ah shaqaalaha iyo Madaxda Guddiga muruqmaalka dekadda ayaa tilmaamay in dhibaatooyinka ay sidoo kale ka cabanayaan ay ka midtahay in tirada shaqaalah oo gaaraya shan kun laga soo reebo saddex boqol iyo konton, isla markaana ay jiraan dhibaatooyinka kale oo loogu geystay gudaha dekadda, waxayna Madaxda dowladda ka codsadeen in ay wax ka qabtaan cabashadooda ku aadan howlaha dekadda. Agaasimaha arrimaha bulshada ee Xafiiska Ra’iisul wasaaraha Cabdicasiis Yuusuf oo kulanka ka hadlay ayaa sheegtay in cabashadooda ay u gudbinayaan Madaxda dalka, si wax looga qabto dhibaatooyinka ay sheeganayaan. Aweys Sheekh Xadaad Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha bulshada ayaa isna sheegay in siyaasadda dowladdu aysan ahyan in lakala diro shaqalaha dowladda, balse ay tahay in shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada, isagoo xusay in ay aad uga xunyihiin waxa ku dhacay. Cabashada ay qabaan shaqaalaha muruq maalka dekadda Muqdisho ayaa imaanaysa xilli 21-kii bishaan howlaha dekadda Caalamiga ah ee Muqdisho lagu wareejiyay Shirkadda laga leeyahay dalka Turkiga oo dib u habeyn ku sameyneyso.
Next: Ra’iisul wasaare Cabdiweli iyo wafdi uu hogaaminayo oo dalka ku soo laabtay